Ny fofonaina izay namakivaky ny vavahadin'ny homamiadana dia namakivaky ireo zoro hita maso, nandalo azy ireo, ary avy any am-bavahadin'ny capricorn dia miverina toy ny manas, ny saina avo kokoa, ny maha-olona, ​​ny manana saina, mihevitra ny tenany ho any an-tany.
Vol. 2 JANOARY, 1906. Tsia
THE Zodiac no famantaranandro lehibe be dia be tsy manam-petra izay, an-tsokosoko, an-tsokosoko, izay miala amin'ny fotoana nahaterahan'ny universite, ny faharetany sy ny fahalavoana ary miaraka amin'izany dia mamaritra ny fanovana sela ra ao amin'ny mivezivezy amin'ny alàlan'ny vatana.
Ny Zodiak dia baibolin'ny tsy manam-petra, ny tantara sy ny boky momba ny famoronana, fiarovana sy fandringanana ny zavatra rehetra. Izy io no firaketana ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavin'ny ho avy.
Ny Zodiac no lalan'ny fanahy avy amin'ny tsy fantatra amin'ny alalan'ilay fantatra sy ny tsy hita ao anatiny sy any aoriana. Ny fianarana ny Zodiac, ary izany rehetra izany, dia ao amin'ireo famantarana roa ambin'ny folon'ny olona.
Ny Zodiaka sy ny boribory misy famantarana roa ambin'ny folo dia manome ny lakile ho an'ny noumenal tsy voatanisa ary amin'ireo fiandohana nalaza be dia be. Manaova sary tsipika marindrano manomboka amin'ny homamiadana ka hatramin'ny capricorn. Avy eo ny famantarana eo amin'ny tsipika dia maneho ny tontolo tsy voafetra; ny famantarana eto ambanin'ny tsipika marindrano manomboka amin'ny homamiadana ka capricorn dia maneho izao rehetra izao hita eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana. Ny famantarana ny homamiadana, virgo, ary libra, dia maneho ny fidiran'ny fofonaina amin'ny fiainana sy ny endrika, ny fivoaran'ny endrika ho firaisana ara-nofo, ary ny fihanaky ny fofonaina ao. Ny famantarana famantarana libra, scorpio, sagittary, ary capricorn, dia maneho ny fivoaran'ny fofonaina amin'ny alàlan'ny firaisana ara-nofo, faniriana, fisainana ary maha-olombelona, ​​ny tsingerin'ny fisehoana, ny famoronana ary ny fivoaran'ny fofonaina amin'ny alàlan'izao tontolo izao hita maso, ary ny fiverenany hatrany. tsy hita maso.
Raha ny fikambanam-barotra manomboka amin'ny kansera satria ny fofonaina dia tsy mahomby amin'ny fahazoana fahalalana feno sy feno, araka ny asan'ny mari-pamantarana capricorn, na ny maha-olona azy, fony tao anaty sy talohan'ny nahafatesan'ny olona - izay toetra no noforonina avy amin'ny famantarana ny fiainana, ny endrika, ny firaisana ara-nofo, ny faniriana ary ny eritreritra - avy eo maty ny toetra ary ny isam-batan'olona dia manana fitsaharana, ary manomboka amin'ny fofonaina indray mba hananganana toetra hafa. Mbola mitohy ny fiainana aorian'ny fiainana mandra-pahavitan'ny asa lehibe ary tsy mila fatiantoka intsony ny isam-batan’olona, ​​raha tsy hoe sitrapo.
Ny tsofoka no voalohany niseho tamin'ny fanombohan'ny tsy fandraisan'ity tontolo ity; namakivaky ny ranon'ny fiainana izy ary namelona ny zavamiaina fiainana; mbola mamofona sy miaina ao anaty ranon'aina, ny fofonaina no nahatonga azy ireo hirobona ho endrika ethereal-astral, tat to aoriana, ho lasa mofomamy ara-batana, ary ny fofon'aina no nanangana ampahany azy. Avy eo dia ny fofom-bava no tadiavin'ny faniriana araka ny fomban'olombelona ary napetraka ao an-tsain'olombelona. Tamin'ny fisainana dia nanomboka ny andraikitry ny olombelona; eritreritra dia karma. Ny fofonaina, amin'ny alàlan'ny eritreritra, dia nanomboka nampita ny fiainana sy ny endrika, ny firaisana ara-nofo ary ny faniriana, ho ao anaty akanjon'ny ego avo kokoa, izay ny maha-olona azy manokana. Tsy afaka ny ho tonga nofo tanteraka izy raha tsy hoe hifarana amin'ny toetrany ny olona.
Ny maha-olombelona manokana dia tsy ny fiainana, na dia ny fofonaina aza dia ilay ezaka voalohany ny fofonaina izay mamelona ny fiainana ho mavitrika, mamaritra ny fizotran'ny fiainana ary mamehy ny sehatry ny asa fivelomana. Ny maha-olombelona manokana dia tsy miforona, na dia ao amin'ny fahatongavan-toetra tsirairay avy aza dia mamorona endrika. Ny maha-olombelona manokana dia mamorona endrika endrika ho an'ny toetrany manaraka izay hatsangan'ny fiainana sy teraka an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny firaisana. Ny maha-olombelona dia tsy firaisana ara-nofo, na dia nahatonga ny firaisan'ny olon-droa taloha ho lasa iray amin'ireo firaisana mety ho tafiditra ao aminy ny maha-olona, ​​mba handalovan'ny afon'ny firaisana ara-nofo ary ho resin'ny herin'ny an'izao tontolo izao. ny maha-olombelona dia mety hampitoviana ny fofona ivelany sy anaty efi-piainana, ho lasa tsy zakan'ny hafa ary afaka hampandeha tsara ny lalan-kalehany amin'ny alàlan'ny rivo-doza astraly, ny faniriana, ary ny firaisana ara-nofo, amin'ny alàlan'ny firaisana mba hanatanterahana ny faniriana amin'ny fianakaviana sy izao tontolo izao, ary mandalo sy mandritra ny vatan'ny firaisana ara-nofo mba handanjalanja, hifanaraka ary hiray amin'ny maha-iray, izay hita ho misaraka amin'ny asany roa sosona toy ny fofonaina sy ny maha-izy azy manokana, fa raha ny marina, dia iray ihany amin'ny asany tanteraka. Ny maha-olombelona manokana dia tsy faniriana, na dia manaitra ny faniriana avy amin'ny toerany mangina izany izay manintona sy hisintona ny maha-olona azy ho fiainana efa naseho. Avy eo dia miasa amin'ny faniriana ny isam-batan’olona ary mandresy ny fanoherana atolotra. Ary noho izany dia mihamahery vaika ny saina, ary io no alalàn'ny faniriana hifindra amin'ny sitrapo.
Ny maha-olombelona manokana dia tsy noheverina, na dia miteraka fisainana aza izany amin'ny alàlan'ny fofonain'ny faniriana ary noho izany dia mahatonga ny fizotran'ny fampijaliana avy any an-danitra, dingana iray izay iaretan'ny tsirairay avy amin'ny fanaintainana sy fahafinaretana, fahantrana sy harena, fandresena ary faharesena, ary mipoitra avy amin'ny lafaoro ny fitsapana tsy mety maty amin'ny fahadiovany sy ny fiadanany amin'ny tsy fahafatesany. Ny saina ambony kokoa dia mitovy amin'ny antsoina hoe maha-olona azy. Io no fitsipika I-am-I, izay manaloka ny toetran'ny olona ary ampahany amin'ny fiainana ka hatramin'ny fiainana. Ny saina ambany indrindra dia taratry ny saina avo kokoa sy ny maha-olona ary izany no ampahany amin'ny saina ambony izay mitombo. Izay antsoina matetika hoe ny saina dia ny saina ambany, izay miasa amin'ny alàlan'ny cerebellum sy cerebrum, ny atidoha ivelany.
Manana saina dimy izao ny saina. Ireo matetika dia voalaza fa toy ny fofona, manandrana, mandre, mahita, mampihetsi-po na fahatsapana, saingy misy fiasa roa hafa ao an-tsaina izay tsy fantatra amin'ny ankapobeny ary tsy dia fahita firy satria tsy ampiasain'ny olona na tsy zakan'ny maro. Izy ireo dia ampiasain'ny mpijery lehibe indrindra ary ny fampiasana azy dia mameno ny olombelona. Ireo fahatsiarovan-tsaina sy asan'ny saina roa ireto dia ireo fahatsapana fa I-am-I-am-anao-ary-ianao-ianao. Ireo taova mifanentana amboarina ho an'ireo fiasa ireo dia ny vatana pituitary sy ny glandre pineal, izay atrophied ankehitriny ao anatin'ny olon-tsotra. Ny fahaiza-manao, ny ankehitriny dia mifangaro ihany, dia fahalalana sy fahendrena, fahalalana sy maha-izy.
Ny saina ambany dia tsy maintsy mampiray amin'ny zavatra iray, na amin'ny eritreritra ambony na hafa amin'ny eritreritra sy ny faniriana. Ireo fironana roa ireo dia ny dingana roa amin'ny fitiavana. Ny iray matetika dia mifandray amin'ny eritreritra sy ny faniriana ary izany no antsoin'ny olona hoe "fitiavana". Ny fitiavana ambony izay tsy antsoina matetika amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe ambony kokoa. Io fitiavana io dia tapaka tsy misy fahatsapana sy toetra; ny fotony dia ny fitsipiky ny fahafoizan-tena, manolotra ny tenany ho amin'ny fitsipika mahasorena.
Ahoana no mahatonga ny saina ho andevon'ny sain'ny saina, ny faniriana, amin'ny vatana, na dia ny fofonain'ny saina aza no mpamorona azy ary tokony ho mpitondra azy ireo? Ny valiny dia hita ao amin'ny tantara lasa teo amin'ny saina tonga nofo. Izany no izy: taorian'ny namoronan'ny saina ny sainy ary nanomboka nampiasa azy io, ny fanahin'ny namorona no nahatonga ny saina hamantatra ny tenany amin'ny toetrany.
Ny ampahany amin'ny toetra izay antsoina hoe saina ambany dia miforona ao anaty toetra (biby) rehefa teraka. Ny fahatongavan-tena dia mitranga amin'ny alàlan'ny fofon'aina ara-batana, izany hoe, ny saina ambany dia miditra ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fofon'aina ara-batana, saingy tsy fofon'aina ara-batana izany. Ny fofon'aina ara-batana dia avy amin'ny fofona-tsaina, ary io kibo an-tsaina io dia ny saina ambany kokoa. Io fofon'aina io no fisainana avo kokoa, ny isam-batan'olona, ​​izay ao amin'ny Baiboly antsoina hoe hoe pneuma masina, ary antsoina koa hoe fofona ara-panahy. Tsy ho tonga izy raha tsy mifoha indray ny olona, ​​ary hiaina indray ny lehilahy satria ny pneuma, amin'ny teny hafa, ny maha-olona iray manontolo.
Satria ny tontolon'ny hala dia voafetra amin'ny alàlan'ny tranon-jaza azy ihany, ka toy izany koa ny tontolon'ny olombelona voafetra amin'ny eritreritry ny fanenany. Ny tontolon'ny isam-batan'olona dia asan'ny eritreritra izay itodihan'ny mpanenona ary mbola manenjana. Mamoaka ny kofehy azy ny hala, ary mametaka azy amin'ny zavatra iray, ary ny iray hafa, ary ny iray hafa, ary eo amin'ireto andalana ireto no amboarany ny tontolony. Ny saina dia manitatra ny lanjany ao an-tsaina ary mametaka azy ireo amin'ny olona, ​​toerana sy idealy, ary ireo, miaraka amin'izany, amin'ny alàlan'ireo eritreritra ireo dia manangana ny tontolony. Fa ny tontolon'ny lehilahy tsirairay no tsy azo atao; ny tontolony dia voafetra ho azy irery ihany; ny fitiavany sy ny tiany, ny tsy fahalalany sy ny fahalalany dia mifototra ao aminy. Mipetraka amin'ny tontolony manokana izy, ny fetrany izay haoriny. Ary ny zavatra heveriny ho tena misy dia ny sary eritreritra izay namenoany azy. Raha azo esorina ny tranokala ary mijanona manangana hafa ny hala, dia toy izany koa amin'ny fiainana tsirairay, ny maha-olona no mahatonga azy hanorina tontolo vaovao, na dia matetika aza ny toetra manokana no tsy mahalala izany.
Ny maha-olona sy ny maha-olona dia ampiasaina mifanolo toy ny hita amin'ny famakafakana ny lexicons efa ekena indrindra izay omena azy roa ireo dia midika ho fahazarana sy toetoetran'ny saina sy ny vatana. Ny fiandohan'ireo teny ireo kosa dia mifanohitra amin'ny dikany. Ny maha-olona dia avy amin'ny isan-sonus, amin'ny alalan'ny feo, na maneno amin'ny alàlan'ny. persona dia ny saron-tava izay nilalao ny mpilalao taloha taloha, ary izany dia midika fa ny akanjom-bolo rehetra namboarin'ny mpilalao iray nefa manondro ny toetrany rehetra. Ny maha-olombelona avy amin'ny in-dividuus, tsy voazarazara. Ny dikany sy ny fifandraisan'ireo teny ireo dia mazava tsara sy miavaka.
Ny maha-olombelona dia anarana fotsiny. Azo ampiharina amin'ny siansa, tontolo iray, na olombelona na amin'ny olona rehetra izay maneho ny fitsipiky ny fahatsiarovan-tena.
Ny toetrany dia ilay saron-tava, akanjo, akanjo, izay akanjon'ny tsirairay avy. Ny maha-olona azy dia ny ego tsy azo zahanaina izay mieritreritra sy miresaka ary manao zavatra amin'ny alalany na ny toetrany. Tahaka ny mpilalao iray dia mampahafantatra ny tenany amin'ny fitafiana sy ampahany ny mombamomba ny tena rehefa manomboka ny filalaovana, ary, matetika, dia manohy mampahafantatra ny tenany amin'ny ampahany ary milalao mandritra ny hetsika mifoha. Ny toetrany dia amina fiainana sy endrika ary firaisana ary faniriana izay, rehefa amboarina tsara sy mitandrina tsara, dia ilay milina fisainana izay mamofofofon'ny maha-izy azy ary avy amin'izany no eritreretiny.
Ao amin'ny toetran'ny olona dia misy hazo iray izay, raha ny maha-olona, ​​ilay mpamboly, dia hamelona sy hikolokolo izany, dia afaka manangona sy mihinana ny voany roa ambin 'ny folo izy, ary mitombo ho tonga fiainana tsy mety maty. Ny toetrany dia endrika, akanjo, saron-tava, izay hisehoan'ny maha-izy azy ary handray anjara amin'ilay trangan-javatra mampihomehy-tantara-hatsikana an-tsary amin'izao vanim-potoana izao ankehitriny no lalaovina an-tsehatra. Ny toetra dia biby izay manana ny isam-batan’olona, ​​ny mpandehandeha etoana, ny fanompoana ary raha raha mamahana sy mitarika ary mifehy izy, dia hitondra ny mpitaingina azy hamakivaky lemaka karakaina sy fitomboan'ny ala, manerana ireo toerana mampidi-doza, mamakivaky ny efitr'i an'izao tontolo izao. ny tanin'ny fandriampahalemana sy ny fandriam-pahalemana.
Ny toetrany dia fanjakana, izay ananan'ny olona tsirairay avy, ny mpanjaka, voahodidin'ny minisitra azy, ny sainy. Mifehy ny seza ao amin'ny efitranon'ny fon'ny mpanjaka ny mpanjaka. Amin'ny alàlan'ny fanomezana fangatahana marim-pototra sy mahasoa an'ny olom-peheziny ihany dia hivoahan'ny fisafotofotoana, fikomiana ara-dalàna sy fampifangaroana noho ny korontana sy fikomiana, ary hanana firenena milamina sy voafehy izay anaovan'ireo zavamananaina tsirairay anjara ho an'ny soa iombonana. ny firenena.
Amin'ny fanarenana indray ny maha-olona mialoha ny fahaterahana sy ny fanafiana azy io miaraka amin'ny harenan'ny fahalalany aorian'ny fahaterahana, dia natao matetika ny fananganana sy fampiroboroboana an'izao tontolo izao hatramin'ny niandohany azy, miaraka amin'ny tantaran'ny vanim-potoana rehetra. Ao amin'io toetra io no misy ny maha-izy azy, mpamorona, mpiambina, ary mamorona indray izao rehetra izao — ao amin'ilay atrikasa alemika amin'ny vatana. Ao amin'ity atrikasa ity dia misy ny tranomboky majika miaraka amin'ny rakitsoratry ny vanim-potoana sy ny horonosony amin'ny ho avy, misy ny alembika sy ny hazo fijaliana ao aminy izay mety handraisan'ny mpanao majika ny alchemist avy amin'ny sakafon'ny vatana ny quintessence izay ilay elixir fiainana, ny nectar amin'ireo andriamanitra. Ao amin'ity efitrano alikaola ity dia mety hamindra ny filana sy ny filana ary ny faniriana ny olona amin'ny fanadiovana, ny fanovana ary ny fanalan-jaza, fantatry ny zavakanto majika. Eto izy no mandefa ny metaly basilana ny filana sy ny toetrany ambany amin'ny mason'ilay mpanefy ho volamena madio.
Eto dia mandany ilay asa lehibe, ny misterin'ny vanim-potoana ny mpanao majika alchemist — ny fanovana biby ho olona sy olona ho andriamanitra.
Sarobidy ny toetrany. Raha toa ka tokony ho fongana ankehitriny ny toetra manokana, maninona no namboarina io ary maninona no avela hitombo? Raha ankehitriny amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny dia tokony ho ringana ny toetra maha-olona iray dia hianjera ao anatin'ny nofin-tsofin'ny alina tsy mavitrika, ny alin'ny an'izao tontolo izao, na hirotsaka amin'ny feon-dàlambe mandrakizay, na hametraka gadra tsy mety maty ao amin'ny afovoan'ny fotoana, manana fahalalana nefa tsy manam-pahefana mampiasa azy; mpanao mpandrafitra tsy misy marbra na paiso; mpanefy vilany tsy misy kodiarana na tanimanga; fofonaina tsy misy faniriana, vatana na endrika; andriamanitra tsy misy ny tontolony.
Ny mpamboly dia tsy hahavokatra raha tsy ny hazo; tsy afaka nilalao ny anjarany ny mpilalao raha tsy hoe ny volany; tsy afa-nandeha ny fivezivezena raha tsy biby ny mpandeha; tsy ho mpanjaka raha tsy manana ny fanjakany ny mpanjaka; ny mpanao majika amin'ny alchemist dia tsy afaka niasa ody raha tsy ny laboratoara. Fa ny hazo dia mamoa voa tsy misy ilana azy na tsy misy ilana azy, na tsy mamoa voa mihitsy, raha tsy voajinja ny mpamboly; ny fitafiana dia tsy misy endrika na ampahany amin'ny filalaovana raha tsy misy ilay mpilalao no mitafy azy; ny biby dia tsy hahafantatra ny alehany raha tsy misy ny mpandeha mba hitarika azy; ny fanjakana dia hitsahatra ho fanjakana tsy misy mpanjaka hanjaka aminy; Ny laboratoara dia tsy hisy ilana azy raha tsy misy ny mpanao majika raha miasa ao.
Ny hazo dia fiainana, endrika endrika, ny fanirian'ny biby; izy ireo dia mitondra vatan'ny firaisana ara-nofo. Ny vatana manontolo dia laboratoara; ny maha-olona azy no mpanao majika; ary ny eritreritra dia ny fizotry ny fampitana. Ny fiainana no mpanorina, ny endrika dia ny drafitra, ny firaisana ara-nofo dia fifandanjana sy fitoviana, ny faniriana no angovo, noheverina ny fizotrany ary ny maha-manokana ny maritrano.
Azontsika atao ny manavaka tsara ny maha-olona sy ny toetrany. Rehefa mieritreritra lohahevitra momba ny etika sy fitondran-tena manan-danja ny feo maro no ho re, samy manandrana mitaky ny saina izy ary milentika amin'ny hafa. Ireo dia feon'ny toetra, ary ny iray izay miteny mafy dia matetika no hanjaka. Saingy rehefa mangataka am-panetren-tena ny fahamarinana ny fo, dia misy feo iray mandre feo malefaka rehefa mbola miady hevitra. Io dia feo maneso ny andriamanitra anatiny iray - ny saina avo kokoa, ny maha-olona.
Antony, fa tsy ny dingana antsoina hoe fisaintsainana. Miteny izy io nefa indray mandeha isaky ny lohahevitra. Raha ny voaroy no mihetsika dia misy fahatsapana hery sy hery ary toky nanatanterahana ny tsara. Fa raha misy mijanona hifamaly ka hihaino ny feon 'ny saina ambany, dia lasa diso fanantenana sy misafotofoto izy, na mamitaka ny tenany amin' ny finoana fa iray amin 'ny feo maro ny iray feo. Raha misy mifanditra amin'ny feo tokana na mandà tsy hihaino rehefa miteny dia hitsahatra tsy hiteny izy ary tsy hananany fomba hahafantarana marina ny ratsy. Fa raha misy mihaino azy tsara ary hanaraka tsara an'izay voalaza ao, dia mety hianatra hifanerasera amin'ny andriamaniny amin'ny zavatra manan-danja rehetra izy, ary handeha amin'ny fandriam-pahalemana isaky ny tafio-drivotra mandra-pahatongany ho lasa fananana fahatsiarovan-tena. -Manjary saina.